Fantaro Ilay Vondrona Feminista Nikaragoaiana Miady Amin’ny Herisetra Atao Amin’ny Vehivavy Ao Amerika Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2016 8:38 GMT
“Ampahany amin'ny mpanorina ny La Corriente” nandritra ny valandresaka feminisita nokarakarain'ny vondrona tamin'ny jona 2016. Saripika nalaina tao amin'ny Facebook.
Natomboka tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1990s, ny La Corriente izay fariparitana ho “karazana tambajotra feminista Amerikana Afovoany iray miresaka ny andiany na ny mpikatroka tsirairay.” Manoka-tena ho amin'ny fanabeazana, famoahana (boky aman-gazety) ary fanomanana fihaonana amin'ny fandehan'ny resaka miralenta ao amin'ireo fiaraha-monina ao Amerika Afovoany sy ny fomba ahafahan'ny vehivavy miara-miasa amin'izany ny mpikambana ao aminy. Tamin'ny voalohany, ary naharitra ela, dia fikambanana nifototra nanerana an'i Amerika Afovoany ny La Corriente, saingy taty aoriana izy no nampifantoka ny ezaka rehetra nataony ho ao Nicaragua.
Miorina ao Managua ny fandaharan'asa izay miompana amin'ny sehatra anankitelo: fanabeazana, fikarohana ary fifandraisana. Nikarakara fanentanana ifotony vaovao iray ny mpikatroka isan-taona, izay nikendrena voalohany indrindra ny tanora lahy sy vavy. Miasa indrindra amin'ny lohahevitra tahaka ny zo ara-pananahana sy fiterahana ry zareo ary miresaka ihany koa ny fanjakana laïka. Avy eo ry zareo nampivelatra ny fikatrohany tamin'ny fanomanana hetsika tahaka ny “Las Reinas Chulas” (“Ireo Mpanjakavavy Mahafatifaty”), seho tantara an-tsangana any amin'ny cabaret sy ny hetsika feminisita izay niarahan-dry zareo mbamin'ny fikambanana iray hafa nanangana. Nahitana fahombiazana tokoa ny tantara tsangana, ary nahafahan'ny La Corriente nahatratra olona maro indray mandeha sy nampita soatoavina amin'ny fomba mazava. Ny “Los Machos” izay hita amin'ny lahatsary etsy ambany, dia natokana hamoahana ny fomba fijerin'ny (fisainan'ny) vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fomba mampihomehy.
Asa hafa ataon'ny La Corriente ihany koa ny tantara amin'ny radio “Cuerpos Sin Vergüenzas” (“Vatana Tsy Menatra”), izay mandeha isan-kerinandro ao amin'ny tambajotran'ny radio Oniversiten'i Amerika Afovoany, izay hiresahany lohahevitra maro mifandraika amin'ny zo ara-pananahana sy fiterahana, toy ny fahasamihafana ara-pananahana. Ny tanjon'ny tantara dia ny handresy lahatra ny vahoaka sy hanangana sehatra fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny mpihaino. Azo arahina an-tserasera am-peo amin'ny alalan'ny Ivoox ireo tantara ireo. Ny fizarana farany, mitondra ny lohateny hoe “Celebramos Nuestro Orgullo” (“Asandratray ny Reharehanay”), dia natokana ho an'ny fireharehana LGBTIQ:
Tamin'ny 28 jona, nankalazainay tamin'ny alalan'ny diabem-pirenena izay niainga teo amin'ny Colegio Teresiano [Lisea Mb Teresa] ary nifarana teo amin'ny Metrocentro [afovoantanàna] ny Androm-Pireharehana lesbiana-gay-biseksa-trans-interseksa-queer teto Nicaragua, diabe nandraisan'ny vondrona feminista sy LGBTIQ maro anjara noho ny fahatsapana hitaky fanajana ao amin'ny fiarahamonina izay mbola mikiry mafy ny fanavakavahana mahazo ny vehviavy sy nisafidy hizaka fananahana hafa.
Ao anatin'ny fikatrohana ataon'ny La Corriente ny fiarovana ny fahasamihafana ara-pananahana ka namoahana fandraisana an-tanana tahaka ny “Revivir La Foto” (“Mampiaina indray ny sary”). Ity andian-tantara ity dia vokatry ny fikarohana nataon'ny vondrona antsoina hoe “Transitar Por el Género” (“Miampita karazam-pananahana”) mifantoka amin'ny famariparitana lahy-vavy sy ny fanadihadiana ny antsoina hoe “vatana mpisintaka” izay mihaika ny lamina ara-piarahamonina sy ara-pananahana fehezin'ny fenitra lahy-sy-vavy. Ao amin'ny lahatsary ny mpandray anjara no niangaviana haka sary avy tany amin'ny taona maro tany ary hanazava ny maha zavadehibe ilay fotoana tamin'izany andro izany :
Ao amin'ny fizaran-tantara eo ambony i Shandi mampiseho ny sariny nandritra ny fanolorana diplaoma tany amin'ny lisea ary niteny fa ny tanjony ambony indrindra tamin'izany dia ny fampiofanana arakasa, ary hatramin'ny fampivoarana ny tena maha izy azy marina. Ao amin'ny lahatsary i Shandi niteny fa afa-niatrika ny oniversite izy, saingy ny tontolo tsy manam-pandeferana tany no tsy nahavitany ny fianarany hahazoany ny diplaoma.
Azo arahina amin'ny antsipirihany kokoa ao amin'ny tranonkalany sy ireo fantsona amin'ny tambajotra sosialy isan-karazany ireo fandraisana an-tanana sy tetikasa notontosainy. Ny asa farany indrindra nataon'ny La Corriente dia fihaonam-paritry ny feminisita natao tao amin'ny Fihaonamben'ny Feminista Amerikana Afovoany ao Managua tamin'ny tapaky ny volana Jona, izay azonao arahina ao amin'ny tambajotra sosialy isan-karazany. Ny fanamby atrehin'ny vehivavy ao Amerika Afovoany, ny tsiri-pahitana ny vehivavy Afrikana ary ny fandrarana ny fanalan-jaza ao amin'ny faritra izao no sasantsasany amin'ny lohahevitra nasongadin'ny mpandray anjara.